Olee otú igwu egwu WMV faịlụ na VLC
1.5 Play M2TS na VLC e
Dịtụwo mgbe ị gbalịrị akpọ a WMV faịlụ na kọmputa gị site na iji a VLC? Akpa ihe WMV faịlụ? Nke a acronym anọchi Windows Media Video na e mepụtara site Microsoft. Microsoft isi ebumnuche n'ihi na nke a mmepe bụ iji strimụ online ọtụtụ ngwa. WMV bụ otu n'ime video mkpakọ formats na ka ị na tọghata nnukwu faịlụ n'ime gh obere faịlụ dị ka ị na-egwu video na kọmputa gị. Dị ka ị na-egwu a Ọkpụkpọ ị na-adịghị ka nchegbu banyere àgwà nke gị video ebe ọ na-echebe.
Nke a na ụdị faịlụ Ọkpụkpọ, Windows Media Video, bụ ogugu na ọtụtụ media Player dị ka VLC, Windows Media Player, RealPlayer, MPlayer, Media Player Omuma dị nnọọ ole na ole aha. Otú ọ dị, Windows Media video bụghị ogugu na Mac ma ọ bụrụ na ị na-egwu na VLC media ọkpụkpọ. Ọ bụrụ na ị bụ onye na Mac ọrụ m n'aka na ị chere ihu nsogbu a severally, na i nwere ike iche na kọmputa gị na mebiri emebi ma ọ bụ WMV faịlụ na-emerụ. Hey Ọ dịghị, nke ahụ bụ bụghị ikpe. Ihe kpatara ya bụ na WMV eji Microsoft codecs na-adịghị arụ ọrụ na OS X sistemụ. N'ihi ya a pụrụ ịbụ ihe na-akụda ka nwere WMV faịlụ na Mac. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ikpe ị na-agaghị na-ekiri na video ma ọ bụrụ na ị na-eji Mac? The ozi ọma bụ na Wondershare abịawo Mac ọrụ inyere ha na-ekewaghị Wondershare Video Converter Ultimate. Nke a ngwa bụ ihe kasị mma VLC nnyemaaka na i kwesịrị inwe.
Na-egwu WMV faịlụ gị Mac, ị kwesịrị ị na tọghata faịlụ ka ọ bụla usoro-akwado site na Mac. Akakabarede ahụ kwe omume site na iji Wondershare Video Converter Ultimate for Mac. Nke a ngwa retains àgwà nke Video mgbe ị tọghata faịlụ. Ka ịhụ otú na-egwu WMV faịlụ na a na ngwa mgbe nbudata ya na Mac version.
1 Download na ẹkedori ngwa na gị Mac.
Ọ bụ dị na ukara Wondershare saịtị. E nwere free ikpe ma ọ bụ i nwere ike ịzụta ya ma ọ bụrụ na ị na-ezuru bucks ego.
2 Mepee WMV faịlụ na App
Ị nwere ike ịhọrọ WMV faịlụ na ị chọrọ na-ekiri, site na ịga na Njikwa NchNhr, wee pịa on Họrọ File. Mgbe ahụ họrọ chọrọ Ohere Media Video.
3 Họrọ otu mmepụta format-akwado site na Mac
The formats-akwado site na mac bụ MOV na MP4 na-arụ ọrụ na QuickTime. Ya mere, pịa ọ bụla nke a Icon formats dị ka ihe mmepụta usoro.
4 tọghatara WMV faịlụ ka ịmalite ịkpọ egwu
Mgbe ị na-ahọrọ faịlụ mmepụta format ugbu a pịa a button na-emi odude na ala n'aka nri iji malite usoro nke akakabarede. Ọ bụ-acha anụnụ anụnụ na agba. Nwee ndidi ruo mgbe dum usoro zuru ezu. Mgbe ọ na-converted-egwu video na QuickTime. Olee otú akpali ọ bụ? Ole na ole clicks na ịtụnanya Wondershare Video Converter Ultimate for Mac ị nwere ike ugbu-egwu .wmv faịlụ.
N'ezie a ngwa bụ uru nbudata ebe ọ bụ a ngwọta maka niile windows Media Video faịlụ na i nwere ike igwu gị Mac iji VLC.
> Resource> VLC> Olee otú igwu egwu WMV faịlụ na VLC?